सधैँ सुन्दर तस्वीरले फ्यान हरुको मन जित्ने निक्की यस पटक भइन् उ:प्स मो-:मेन्टको सिकार !
माघ ०३, २०७८ RT
भारतको चर्चित शो ‘बिग बोस १४’ बाट चर्चामा आउन सफल निक्की तम्बोली पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा हुने गरेकी छिन् । निक्की आफ्ना फ्यानहरुसँग जोडिरहनको लागी सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् …
बलिउड अभिनेत्री जाह्नवीको अहिलेसम्म नदेखिएको यस्तो रुप, भाइरल हुनकै लागि यतिसम्म गरेकी हुन् ?
बलिउड अभिनेत्री जाह्नवी कपूरले हालै उनको सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम खातामा केही तस्वीर सार्वजनिक गरेकी छिन् । तस्वीरमा अभिनेत्री निकै बो-:ल्ड देखिएकी छिन् । यस तस्वीरको लागि अभिनेत्रीले पिंक कलरको बिकिनी …
सम्बन्ध विच्छेद भएको दोस्रो श्रीमती र आमिर फेरी एक साथमा ? सुभ चिन्तकलाई खुसीको खबर !
बलिउड अभिनेता आमिर खान दोस्रो श्रीमतीसँग पनि डिभोर्सपछि आमिर खान र उनकी श्रीमती किरण रावका फ्यानहरु निकै निराश देखिएका थिए । उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेदको खबरले सबैलाई चकित बनाएको थियो । …
नेपाली फिल्म ‘चपली हाइट ३’ हेर्न हलसम्म आएनन् दर्शक, फिल्म निर्माताले गरे फिल्म नचलेको स्वीकार !
विभिन्न कारणले प्रदर्शनमा आउन नसकेको निर्माता अर्जुन कुमारको फिल्म ‘चपली हाइट’ यति बेला प्रदर्शनमा आएको छ फिल्म गत शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको थियो । यस भन्दा पहिलेको सिरिजमा राम्रै प्रदर्शन गर्न …
फोटो हेरेर नै जिउ शिरिङ्ग पार्ने खाले करिश्माका अवतार, ह:_-टनेसले मच्चाउछिन् तहल्का
माघ ०१, २०७८ Dip
एजेन्सी : भारतीय अभिनेत्री तथा मोडेल करिश्मा कर(Karrishma Kar) ले भारतीय मनोरञ्जनको दुनियाँमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएकी छिन्। उनी प्रोजेक्ट्सका साथ-साथै सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् र इन्स्टाग्राममा आफ्ना बो:_-*ल्ड …
नागार्जुनको फिल्म ‘द घोस्ट’ बाट बाहिरिइन् अभिनेत्री ज्याकलिन ? अभिनेत्रीको हरायो खुसी !
पुष ३०, २०७८ RT
एजेन्सी- अहिलेको समयमा बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिजको केही तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएसँगै अभिनेत्री समस्यामा परेकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा केही तस्वीर सार्वजनिक भएसँगै विवादमा परेकी अभिनेत्रीको अहिले सुख शान्ति …
हरायो फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ को टिजरमा अनमोलले पाएको मेगा-स्टारको उपाधि !
पछिल्लो समयमा भारतीय फिल्म क्षेत्रमा जस्तै नेपाली फिल्मका अभिनेता तथा अभिनेत्रीलाई पनि कुनै न कुनै उपाधि दिइने गरिन्छ । त्यस्तैमा नायक राजेश हमाललाई महानायकको उपाधि दिएकोमा केही समय पहिले केही …
यस्तो बन्यो फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ को टिजर, अनमोल र सुहानाको प्रेम कथा !
चर्चित नेपाली फिल्मको सिरिज ‘ए मेरो हजुर ४’ टिजर सार्वजनिक भएको छ । अभिनेत्री झरना थापाले निर्माण गरेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’ ले आफ्नो प्रदर्शन मिति तोके सँगै फिल्मको …
अभिनेत्री प्रियंकाले परिवारको साथमा रमाउँदै सार्वजनिक गरिन् यस्ता तस्वीर, तस्वीर सहित !
अहिले अभिनेत्री प्रियंका कार्की अभिनय क्षेत्रबाट केही समय देखि टाढा भए पनि उनको चर्चा अभिनयमा सक्रिय कुनै अभिनेत्रीको भन्दा कम छैन । अहिलेको समयमा अभिनेत्री प्रियंका कार्की सामाजिक सञ्जालमा निकै …
अल्लु अर्जुनको राजसी छाटकाट : आफ्नै प्राइभेट जेट र १०० करोडको बङ्गला
पुष २९, २०७८ Dip
एजेन्सी : दक्षिण भारतीय चलचित्र उद्योगका चर्चित अभिनेता अल्लू अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पा’ ले बक्स अफिसमा धमाका मच्चाएको छ। अझ कोरोना भाइरसको महामारी नपरेको भए फिल्मले अझ बढी कलेक्सन गर्थ्यो। फिल्मले …
५ घण्टा अगाडि RT
८ घण्टा अगाडि RT
अर्जुन र मलाइकाको ४ वर्ष देखिको सम्बन्ध भयो अन्त्य ? नायिका घरबाट बाहिर निस्किनन् !
५ दिन अगाडि RT
शहनाज देखिइन् अहिले सम्मकै फरक शैलीमा, निकै छोटो कालो पोशाकमा गराइन् फोटो शुट !
यी अनौठो हेयर-स्टाइल भएका बालक अहिले छन् बलिउडका शीर्ष अभिनेताको सूचिमा, चिन्नु भयो ?
बलिउडमा यस फिल्म मार्फत डेब्यु गर्दै विपिन कार्की